Inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM -I-MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
Izisombululo zenkonzo epheleleyo, Iinkonzo ze-OEM / ODM kunye nenkxaso ekhethekileyo.
● Uyilo lwemveliso kunye nophuhliso
● Ulawulo lomgangatho kunye nokuthotyelwa
● Imveliso, ukuveliswa nokupakishwa
● Ukufezekiswa kwe-odolo kunye neenketho zolwabiwo eziguquguqukayo
● Inkxaso yobugcisa
Nokuba kuseAsia，amantla Emelika，IYurophu namanye amazwe, besibonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni ze-OEM kushishino lwehlabathi iminyaka emininzi, kwaye sithatha Imowudi yentsebenziswano ye-OEM / ODM njengesicwangciso esiliqili sophuhliso lwexesha elide lwenkampani yethu. Yenza iiparameter zemveliso, iilebhile, ukupakisha, imiyalelo, ukuhanjiswa kunye nezinye iinkqubo ngokweemfuno zabathengi, kwaye wenze ulawulo olungqongqo lomgangatho ngokweemfuno zabathengi.
Yandisa imveliso yakho kunye nokwandisa iintlobo zeemveliso ozibonisayo.
Ungahlaziya ngokulula uyilo esele ikhona okanye uyile imveliso entsha ngokupheleleyo. Ngoyilo lwesiko lethu kunye nobuchule bophuhliso，unokubonelela abathengi bakho ngemveliso eyomeleleyo, ethembekileyo neyahlukileyo yemveliso.
sibonelela ngeemveliso ezizilungiselele kunye neenkonzo ukusombulula iimfuno zesicelo seendawo ezahlukeneyo zeshishini kunye nabathengi, ukuphuhlisa iimveliso ezifanelekileyo izixhobo zakho zokuzenzekelayo okanye iimfuno zovavanyo. Uzokuthi ga，sinawo amalungelo awodwa omenzi wechiza wesizwe angaphezu kwama-40 kunye nemodeli yokusetyenziswa kwepatenti kwizilinganisi zoxinzelelo lwedijithali, iisenzi zoxinzelelo, abalawuli boxinzelelo abanengqondo, ii-sensors ezingenazingcingo, umlinganiso woxinzelelo kunye neenkqubo zolawulo，njl.